Tetika mpampihorohoro 6 mampiasa ny fanoheran'izy ireo (Izay Tokony ho Fantatrao) - Mpanararaotra
Sarotra ny tontolon'ny mpahay siansa. Ny korontana mahazo azy ireo dia mampisavorovoro ny olona manodidina azy momba ny zava-mitranga. Ny fitondran-tena novolavolain'izy ireo dia tena manokana ka misy voambolana manokana takiana mba hahatakarana azy.
Ireto misy fehezan-teny enina avy amin'ny 'fiteny Narcissus' mba hahafantaranao bebe kokoa ny fihetsik'izy ireo sy hilazanao izany amin'ny hafa.
Salady amin'ny teny
Ity andianteny ity dia ampiasaina hilazana andian-teny izay tsy mifandraika ao anatin'ny fehezanteny na kabary, ary tsy misy ifandraisany amin'ny fanontaniana na ny resaka niavian'izy ireo.
Ny niandohany dia avy amin'ny psychiatrie, mamaritra ny fomba firesahan'ny olona mijaly amin'ny schizophrenia indraindray. Miezaka manamboatra fehezan-teny izy ireo ary maneho ny heviny, fa ny atidoha kosa tsy mahay mandamina sy mampiditra syntax mety. Saripika andian-teny fotsiny izay tsy misy dikany.
Fa maninona no ampiasain'ny mpifoka rongony?
Toa sahala amin'ny hoe mamaly ny fanontaniana izy ireo - miteny aho, miteny ianao - na dia tsy fantany aza ny valiny. Manome antoka izy ireo fa hahazo ny teny farany. Fifaninanana mihoampampana izy ireo afaka mamadika na inona na inona ho fifaninanana. Ping pong am-bava, fa tsy olon-dehibe roa manao resaka ara-dalàna.
Izy io dia mifehy ny fanjakan'ny niharam-boina ary miteraka fikorontanana. Amin'ny alàlan'ny hadalany ara-pitenenana dia mitarika tsy fahatokisan-tena sy tsy fananan-tanana ho an'ilay niharam-boina izy ireo ka nilavo lefona ary malalaka kokoa amin'ny sosokevitra. Ny ankamaroan'ny mpifoka rongony dia manana fahalalana voajanahary momba izany ny fomba fampiasana fiteny hahay hanodinkodinana ary ento any amin'ny fanjakana izay iharan'izy ireo 'eo am-pelatanan'izy ireo' (toa mandeha an-tsekoly iray ihany izy rehetra hianatra ireo zavatra ireo).
Ho an'ny fihantsiana miharihary amin'ireo fanjakana ratsy toetra, hampisy ny zavatra iharan'ilay niharam-boina, fa olona ratsy toetra izy, tsy mendri-pitokisana, maloto fitondran-tena,… hampihantona ilay niharan-doza izy ireo amin'ny fotoana mety hipoahany sy hiadiany.
Ity teny ity dia noforonina avy amin'ny sehatra iray tao amin'ny sarimihetsika 'The Wizard of Oz', izay nandefasan'ilay mpamosavy ratsy fanahy ireo gidro manidina hanelingelina an'i Dorothy.
Ny gidro manidina dia ireo olona ampiasain'ny mpihinana fanafody ho fitaovana hahazoana izay tadiaviny. Raha te-hanomboka doka fanosotra amin'ny niharam-boina, ohatra, ny narc dia hanodikodina ny gidro manidina izy hanao ny asa maloto, toy ny fanaparitahana lainga, fampijaliana na fanorisorenana ilay traboina.
Misy karazany roa ny gidro manidina: ilay tsy salama saina loatra ary mino an-jambany ny laingan'ilay narcissist, ary ilay manesoeso izay mikasa ny hahazo tombony amin'ny narcissist. Ny gidro manidina matetika dia fianakaviana na sakaizan'ilay mpihinana zava-mahadomelina.
Ny psikology Leon Festinger no voalohany namariparitra ny teôria momba ny tsy fitovizan'ny saina. Midika izany fa ny fahatsapana ny tsy fitoviana eo amin'ny eritreritra roa miaraka izay mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fihetsika na fitondran-tena.
izay nandresy tamin'ny wrestlemania 2016
Ireo niharam-boina dia mizaka ny fihenjanana maharitra ao amin'ny ati-dohany noho ny fahazoana hafatra roa samy hafa sy mifanohitra amin'ny fotoana iray. Amin'ny lafiny iray, ny lafiny ara-pihetseham-po ao amin'ny ati-doha (mamo tanteraka tamin'ny oxytocine dia be loatra fitiavana baomba ) milaza fa olona mahay, be fitiavana, misy vidiny ity narcistista ity. Etsy ankilany, andian-tranga marobe no mitarika ilay olona hanatsoaka hevitra ara-dalàna fa mandainga, mamitaka, manodikodina ary manala baraka azy ilay narcissist.
Ny vokatra mahazatra amin'ny tsy fitovian-kevitra dia ny adin-tsaina, ny fanahiana, ny tsiny, ny hatezerana, ny fahasosorana ary / na ny henatra. Matetika dia iharan'ny famitahana tena ireo niharam-boina mba hijanonany amin'ny fahatsapana izany fihenjanana izany. Arakaraka ny maha-lehibe ny fampiasam-bolan'ny fotoana sy ny fahatsapana amin'ny fifandraisana (ohatra, andao lazaina fa efa nanambady ny zaza niharam-boina ary manan-janaka amin'ny rongony), dia vao mainka ho voafitaky ny niharam-boina ny famitahana tena mba hanamarinana ny fihetsika ary hijanona ny tsy fitovian-kevitra.
Amin'ny ankapobeny, hiteraka eritreritra vaovao (lainga ho azy ireo) izy ireo noho ny tsy fahatsiarovan-tena mba hanonerana sy handresena ireo izay manelingelina.
Ilay scapegoat sy ilay zazalahy volamena
Ny mpitsabo tena dia tsy manan-janaka hanehoana fitiavana tsy misy fepetra, toy ny ray na reny mahazatra. Manan-janaka ilay narcissist hahafahany mahazo loharanom-pahasoavana vaovao.
Ny mpitsikilo dia manohitra ny zanany, ary tsy mahita azy ireo ho olombelona, ​​fa toy ny fanitarana ny tenany fotsiny. Ny zanaky ny ray aman-dreny tia zanaka dia tsy mahazo fitiavana, fa ny fanaparam-pahefana miseho ho fankasitrahana na tsy fankasitrahana. Ao amin'ny fianakaviana iray izay misy ray na reny mahasarika, dia handray andraikitra ireo ankizy, izay hotendren'ny mpitaona fanafody: ilay zazalahy volamena sy ilay osy scapegoat.
Ny zazalahy volamena dia zanaka ankafizin'ny mpihinana zava-mahadomelina, izay ho taratry ny tenany. Ho an'ny ray aman-dreny mpampihomehy, ny zazalahy volamena dia tonga lafatra, manao ny tsara rehetra foana, tsy misy kilema ary tsy manao lesoka. Ilay mpitsabo rongony dia mitsabo, manala baraka ary miaro ilay zaza volamena, na inona na inona fitondran-tenany tsy mendrika. Ny zaza volamena dia mianatra, manomboka rehefa zazakely izy, mitaky fitsaboana manokana, manome tsiny ny hafa noho ny hadisoany, manodinkodina sy mandainga, satria fantany fa tsy hosazin'ny ray aman-dreniny mihaza izy ireo raha mbola izy / mankatoa sy midera azy izy.
Ilay scapegoat dia ilay zaza ankahalain'ny narcissist ny ondry mainty ao amin'ny fianakaviana. Mihevitra ilay mpitsabo tena fa ny scapegoat dia manao ny tsy mety rehetra amin'ny mpikomy tsy mahalala fomba sy tsy mahay mankasitraka. Ity zaza ity, mifanohitra amin'ny zaza volamena, no tompon'andraikitra amin'ny olana ara-pianakaviana rehetra. Ny raim-pianakaviana na reny mampihomehy dia hanakiana, hanala baraka, tsy hankasitraka ary hanome tsiny ny ozona, na dia tsy nanao ratsy aza ity zaza ity.
Famakiana zava-mahadomelina ilaina kokoa (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
Fanararaotam-pahefana: mekanisma ho an'ireo mpifoka rongony sy fiarahamonina hampijaly ny hafa
Ny teny hoe 'fanamoriana' dia avy amin'ilay marika fanadiovan-drivotra fanta-daza. Teknika fanodikodinam-bola izay ampiasain'ny narcissist hamerina ilay olona iharany, hamerenany azy ireo hiverina amin'ny fiainany amin'ny alàlan'ny fanaovana an-keriny ny fihetseham-po .
Raha sendra mifandray amin'ny mpihinana zava-mahadomelina ianao dia miomàna hahatakatra sy hiatrika an'io dingana fanodinkodinana io ho anisan'ny fifandraisanao. Ny fanamoriana dia mety hitranga afaka volana vitsivitsy aorian'ny nandaozan'ilay mpampihorohoro anao (na nisaraka tamin'izy ireo ianao), na indraindray afaka mandalo taona maro vao mitady anao izy ireo ary manandrana mamily anao.
Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny fampiakaram-pahefana (tena mamorona, araka ny hitanao):
Mahazo hafatra ianao milaza fa manahy anao izy ireo: te hahafantatra ny fiainanao izy, ny zavatra tsapanao, raha ketraka ianao, malahelo sns. Mampiahiahy anao izy sao hahita raha lavo indray ianao ary miverina ho azy / azy.
Nifandray toy ny tsy nisy izy: / nanao ahoana ianao? Nanao inona foana ianao?' Lazainy aminao ny zava-nitranga taminy: toa tsy nisy zavatra nitranga teo aminareo roa. Miantso anao izy na mandefa SMS aminao amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao, amin'ny Krismasy, na amin'ny daty manan-danja hafa.
Fanaraha-maso miaraka amin'ny antoko fahatelo (izany hoe ny ankizy): 'Fantatro fa halanao aho, saingy teneno ny zanak'anabavinao fa tsy afaka manatrika ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany aho, fa tiako be izy.'
Voan'ny homamiadana izy, voan'ny lalan-dra, na te hamono tena. Ity dia mahazatra an'ny narcissist. Izy no mitsapa hoe mbola hikarakara azy ireo ve ianao raha hijery raha mihazakazaka manampy azy ireo ianao. Izany dia toy ny zazakely manana fahasosorana, manamarina raha mitaraina mafy ka mitarika any amin'ny saina tadiavin'izy ireo.
Hafatra izay noheverina fa natao ho an'ny olona iray hafa: nandefa hafatra taminao 'tsy nahy' izy ireo, satria 'voalaza' fa natao ho an'ny olon-kafa (mpiara-miasa vaovao, ohatra) mba handrisika ny valiny na hiteraka fialonana.
Fanahy kambana: mifandray aminao izy ireo hilaza aminao fa fanahy kambana izy ireo, natao hifankatia ianao, ary ho fitiavana ny fiainany foana, ary tsy hahita olona toa azy intsony ianao, inona no fitiavana madio no nanananao. Romeo dia toa adaladala raha oharina amin'izy ireo.
Ity dia lamin'ny fanararaotana ara-pihetseham-po ampiasain'ny narcissist izay nanodinkodin-tena ilay niharam-boina mba hisalasalany ny fahitany, ny fitsarany na ny fitadidiany. Natao izy io mba hahatonga ny olona tra-boina hahatsiaro ho be fanahiana, very hevitra na ketraka mihitsy aza.
Ny niandohan'io teny io dia avy amin'ny sarimihetsika anglisy tamin'ny 1940 nantsoina hoe 'Gaslight' notarihin'i Thorold Dickinson, niorina tamin'ny sombin-tsarimihetsika Gas Light nosoratan'i Patrick Hamilton (fantatra amin'ny anarana hoe Angel Street any USA). Ao amin'ny sarimihetsika, misy lehilahy manodikodina ny vadiny hampieritreritra azy fa adala izy mba hangalarana ny harena nafeniny.
Afeniny ny zavatra toy ny sary sy firavaka, nefa mampieritreritra azy ho tompon'andraikitra izy, saingy nanadino azy fotsiny. Ilay teny dia manondro ny lasantsy ampiasain'ny rangahy ao an-tampon-trano rehefa mikaroka ilay harena miafina izy. Nahita jiro ilay vehivavy, fa ny lehilahy kosa manizingizina fa sary an-tsaina azy ireo.
Ohatra vitsivitsy amin'ny fandrehitra entona ataon'ny mpihary fanafody mahaliana i:
Mody tsy mahazo izay lazain'ilay niharam-boina na tsy mety mihaino.
Ny fandavana ny zavatra nolazainy, na dia minitra vitsy monja aza, avy eo manome tsiny ilay niharam-boina fa tsy nihaino azy mihitsy.
Manova ny lohahevitra milaza fa tsy te hiresaka momba izany izy (na dia zavatra hafa mihitsy aza no noresahin'izy ireo).
Miampanga ilay antoko voaararaotra ho manana eritreritra be loatra ary 'miaina anaty rahona.'
Miampanga ny antoko hafa ho saro-piaro, fananana , mitaky,… rehefa manandrana mamadika ny resaka mba hanafenana zavatra efa nataony.
Ny fametahana ilay niharam-boina nilaza taminy fa mahatsikaiky sy maha-zaza ny heviny.
Manandrana mitoka-monina ilay niharam-boina tamin'ny filazanao azy fa mino ny zavatra lazain'ny olon-kafa izy fa tsy ny zavatra lazainy. Hahatsiaro ho maratra sy hamadika izy. Ny fanokanan-tena no tadiavin'ilay mpampinono ka miankina aminy irery ihany no iharan'ilay niharam-boina.
Ny fandavana ny zavatra nolazain'izy ireo marina: 'Tsy nampanantena / nilaza an'izany velively aho.'
Hamantatra bebe kokoa: Gaslighting: ohatra 22 amin'ity Mindf Manipulative Manpulative brutally * ck ity
Raha sendra mahatsikaritra ireo karazana fihetsika ireo ianao amin'ny olona manodidina anao (any am-piasana, ny olon-tianao, ny namanao, ny olom-pantatrao,…) tsara kokoa ny mihemotra kely ary maka fotoana kely hamakafaka ity olona ity, fa tsy amin'izay lazainy , fa noho ny zavatra ataony sy ny fahatsapanao ny manodidina azy ireo.
Mampitandrina anao ny vatanao hendry fa tandindomin-doza ianao amin'ny endrika fanahiana, tsy fitaintainana, tsy fahampian'ny torimaso, tsy fahatsapana, reraka, mitomany noho ny manga,… Raha tena mpampihomehy ity olona ity dia mifampiraharaha amina olona iray ianao dia mihetsika mavitrika aminao, ary izany dia hiezaka amin'ny fomba rehetra handresena lahatra anao ny mifanohitra amin'izay.
Azonao atao izao ny mamantatra ny iray amin'ireo zavatra enina ireo amin'ny fifandraisana (taloha na ankehitriny) amin'ny fiainanao? Moa ve ity lahatsoratra ity nanampy anao hahafantatra bebe kokoa ny fomban'ny narcissist? Mametraha hevitra etsy ambany miaraka amin'ny eritreritrao.
ahoana no hahafantarako raha tiako izy
Ahoana ny fomba hampitsaharana ny fifikirana amin'ny tovovavy
amin'ny fifandraisana fa toy ny olon-kafa
inona no hatao rehefa leo sy irery
iza amin'ireto manaraka ireto no toetra mampiavaka ny finamanana